Dhageyso: Gudiga dhismaha maamulka Mudug iyo Gal-Gaduud oo xog loo baahnaa bixiyey !!!! - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Gudiga dhismaha maamulka Mudug iyo Gal-Gaduud oo xog loo baahnaa bixiyey...
Dhageyso: Gudiga dhismaha maamulka Mudug iyo Gal-Gaduud oo xog loo baahnaa bixiyey !!!!
Cadaado (Caasimada Online) – Guddiga farsamada ee maamul u samaynta gobolada Mudug iyo Galgaduud oo shalay shir jaraaid ku qabtay magaalada Cadaado ayaa ka war bixiyay meesha hawluhu ay u marayaan iyo waxa u qabsoomay.
Waxay sidoo kale ay ka codsadeen dhammaan dadka ay qusayso arintaani haddii ay noqon lahayeen hay’adaha dowladda iyo kuwa shacabkuba inay gacanka iyo taakulayn ka gaystaan sidoo arinta maamul u samayntu u qabsoomi lahayd.
Halkaanka dhagayso shirkii jaraaid